Nchedo Ntanetị Gọọmentị na Enyemaka nke Igwefoto Igwe - OMG Solutions
Nchedo Ntanetị Gọọmentị na Enyemaka nke Igwefoto Igwe Na-eyi
Site na nsogbu nchedo na-arịwanye elu, onyunyo obodo abụrụla ihe dị mkpa maka gọọmentị. "OMG Iwu Iwu - Igwe Igwe Na-eyi (DVR / WIFI / 3G / 4G) / Digital Evidence Management - Singapore" na-enye ndị uwe ojii aka, ndị uwe ojii okporo ụzọ, nchịkwa nke omenala, ndị agha, na ndị nche gọọmentị na-echekwa obodo nke ọma. na teknụzụ biometric ọhụrụ.
Iji jisie ike nchekwa biometric sistemụ nwere ike arụnyere na ebe dị iche iche ma soro usoro ndị mmadụ gafere ókèala. Nke a gụnyere teknụzụ ọpụpụ mbata ụzọ ọpụpụ, ụzọ ọpụpụ, na ụzọ njikwa mbata, na mbata nchekwa data mba. Ndị gọọmentị chọkwara ngwaọrụ nchebe iji mee ka nkwukọrịta dị oke mkpa dị n'etiti ngalaba ha. Ma inye ntuzi aka na ngalaba ulo oru ha, ma obu banyere ndi oru ha. Ha na-adabere na nyocha arụmọrụ dị elu iji hụ na njikọ dị nchebe na ntụkwasị obi na isi ụlọ ọrụ. Mgbe ndị uwe ojii tinyere aka na ihe esemokwu, ndị otu obodo na ndị mgbasa ozi na-achọ ịma ma è nwere ihe BWC mere, ma ọ bụrụ na ngalaba na-ebunyeghị ndị BWC, ndị otu obodo chọrọ ịma ihe kpatara nke a.
Igwefoto vidiyo ndị na-ahụ maka ahụ bụ ngwaọrụ bara uru nke ndị mmanye iwu nwere ike iji dekọọ nkwụsị okporo ụzọ, njide, ule nyocha, na ajụjụ ọnụ. Igwefoto vidiyo na-eyi ahu nwere igwefoto, igwe okwu, batrị na ebe nchekwa data. Emebere ha ka ha buru n’elu ma ọ bụ yiri ha n’ebe dịgasị iche iche n’ahụ, dabere n’ihe nlereanya.
Nọ na oge ihe ọhụụ nke ngwa mma dị mma, ụdị akụrụngwa kachasị ọhụrụ abanyela na mkpa nke oke dị mkpa iji kwado nchekwa na ọdịmma ọha mmadụ. Igwefoto nwere ahu bu obere ihe nke mmadu ghapu iji ya dika olu ma obu n’akpa uwe mgbe ufodu ndi ozo nwere ihe di nma. Otu onye nwekwara ike iji ya kpuchie ya na okpu nchebe ma ọ bụ n'ime iko. Batrị nke akụrụngwa a dị elu na-aga n'ihu karịa 6 ruo 8 awa na akaụntụ dị oke agbanwe agbanwe. O nwekwara ike idekọ ndekọ oge na mgbede ma ọ bụ na-enweghị isi. Ọ bụ ihe a tụrụ atụ maka ndị ọrụ nchekwa.
N'ime ndị kacha ọhụrụ ka ọ dị afọ ole na ole, ọ ghọọla ịpụta nke ukwuu iji hụ na mgbasawanye ojiji weebụ. N'ihi ya, n'oge a dị ugbu a, o doro anya na mmadụ ọ bụla nwere ike ịnyefe vidiyo vidio n'ọtụtụ nkebi wee bido ịgbawa ndụ. N’ezie, Igwefoto eyi emeela ka ọ bụrụ usoro echekwara maka Gọọmentị yana uru ya na ọghọm ya. Mgbe anyị na-ekwu maka nchekwa na ọdịmma, ndị ọrụ nchekwa ma ọ bụ ndị ọrụ uwe ojii na-akụ mgbịrịgba. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ gọọmentị steeti enyerela ndị ọrụ uwe ojii na ndị ọrụ nchekwa aka ịme kamera nwere anụ ahụ. Ihe ohuru ohuru a na-enye ha ike ka ha dee ihe o bula na-eme na mmeme ma o bu ihe omume obula, mgbe mkparita uka a na-eme mgbe nche dasiri. Nke a bara ezigbo uru n'ịbawanye nkọ dị ka ịkwụ ọtọ na ijikwa mmejọ na ịdọ aka ná ntị nche.
Nwee otu ahụ ọ nwere ike, ọrụ na-ahụ maka ịchọmma Kamara ahụ dị n ’ọ dị n’ ọ dị n ’ọnọdụ ọ dị n’ ọ ga-eji nwayọ na-aghọ ọkọlọtọ uwe ojii na Ngalaba uwe ojii yana otu uwe maka ndị ọrụ uwe ojii niile na mba ahụ. Ufodu ole na ole ama ama ebuwo uzo ohuru n’ihu ha n’ihu ma gbasaa ebe niile. Ugbua igwefoto ndi ahu mere ugbu a abatala n'omume ozo di n’ime iwu iwu. Officeslọ ọrụ ikike iwu ịbịaru nso na ule nyocha iji nyochaa ike ya.
Itinye n'ọrụ Igwe eji ese foto na - eyi na-akọwa ịkwụ ọtọ na ọrụ nke nkewa ndị uwe ojii. Omumu ihe emere gosiputara na oganihu abiawo na usoro oma na omume nke ndi ozuzu igwe site na iji igwefoto eyi. Nke a na-agbakwunye njikere n'etiti ndị cops. Ha na-echewanye ọrụ ha na mkpakọrịta ha na ọnụọgụgụ mmadụ na ndị ọzọ na-emebi ihe karịa ike ojiji dị mkpa iji mee ka ndị a na-enyo enyo na iji ike mee ihe n'ụzọ doro anya.
Ụtụtụ site n'ọtụtụ ebe egosila na mgbe ndị mmadụ na-eche na ha na-ahụta omume ha ga-agbanwe. Mgbe ha hụrụ onwe ha n'okpuru nlekọta na ndekọ nke igwefoto na-eyi ahụ, ha na-erube isi ma gbanwee mmekorita ha na onye na-edekọ. Ihe akaebe enwetara egosiputara na ndi mmadu, ndi mara banyere uzo nke igwefoto na-ele ha, na-achota nkwenye zuru oke ma obu na-anabata omume karia mgbe onye nlele bu ihe nkwado. E nwere oge ole na ole na ọrụ onye ọrụ mgbe onye ha jidere na onye ndu ha na-eweta na ọnọdụ ahụ bụ ọdịiche dị iche iche dị iche iche mgbe ha abụọ na-ezukọ n'ụlọ ikpe maka mbido. Onye na-azaghachi uwe mara mma nke na-ekwu okwu mara mma dị oke iche karịa onye na-eme mmanya na-egbu egbu nke metụtara agha ma debe batrị ahụ. Ndị ọkachamara hụrụ nke ọma na mgbe ụlọ ikpe ahụ na-edekọ vidiyo echiche ahụ ga-abụ ihe pụrụ iche. Ọ na-abụkarị ihe ijuanya na-agbadata n'ụlọ ikpe iji chọpụta onye zaghachiri yi uwe mara mma na akwa nwere isi n'eluigwe nke na-abụghị otu onye ahụ ejidere. Site na iji igwefoto iji jide onye ahụ n'ezie àgwà na ọnọdụ uche ya nwere ike ịba uru na ekele maka mbido.
N'akụkụ mgbanwe mgbanwe omume, uru ndị ọzọ a ghọtara nke igwefoto a na-eyi n'usoro maka nzukọ dị iche iche na-ebelata nnabata ndị obodo na iji ikike eme ihe. Na 2012, na City of Rialto Police Department, na mmekọrịta ya na Mahadum Cambridge United Kingdom, duziri otu akụkọ kwa afọ banyere nsonaazụ na mmetụta nke ndị uwe ojii yi kamera ahụ. Ihe karịrị otu afọ, e nyere igwegharị igwe dị iche iche igwefoto ebe ndị ọzọ enweghị. Nnyocha ahụ bụ ihe atụ dị mfe nke mmegharị dịgasị iche iche n'oge dị iche iche maka nyocha ahụ. Mgbe afọ na-aga, ihe ndị si na ya pụta na-awụ akpata oyi n'ahụ. Nzukọ ndị e kewara igwefoto ahụ nwere mbelata nke iji ikike eme ihe site na 60% site na afọ gara aga. Nyocha a mara ọkwa n'otu aka ahụ na iwe mba dị iche iche banyere nzukọ a yiri nke 88% belatara maka mkpebi afọ gara aga. Onye isi ndị uwe ojii Rialto gosipụtara mbelata ọnụ ọgụgụ mkpesa bụ n'ihi ndị isi na-eme nke ọma ma ọ bụ ndị bi na-eme nke ọma, o yikarịrị ka ọ bụ ha abụọ.
na ọzọ nyocha banyere igwe onyonyo nke ahụ nwere usoro nchekwa yana otu o si ebelata obere iwe ụmụ amaala, Ngalaba ndị uwe ojii Mesa tụbara akụkọ afọ niile ọkachasị elekwasị anya na ibelata mkpesa. Ihe omume ikpe a gụnyere nnọkọ abụọ; Ndị ọrụ nche nke 50 nwere kamera ahụ enyere na 50 na-enweghị kamera ahụ. Mgbakọ abụọ a nwere ike iji aka ha rụọ ọrụ na nche nche na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Nyocha a, bụ nke otu Mahadum nke Arizona chịkọtara, chịkọtara na ndị isi nche na-enweghị kamera ahụ nwere ọtụtụ ngagharị iwe nke ndị bi ebe ọzọ ọtụtụ oge. Ọzọkwa, nyocha ahụ nyekwara njedebe na ndị ọrụ nche ahụ nke na-eyi igwefoto ahụ nwere uwe nwere mbelata 75% na ojiji nke mkpesa ike yana mbelata 40% na ihe mgbochi ala sitere na afọ mbụ ebe eserese ahụ adịghị. tinye n'ọrụ.
Nyocha abụọ ahụ gosiputara na ese foto ndi mmadu nwere nchebe maka ochichi nke eziokwu na ihe di egwu na egosiputa na ese foto ndi mmadu na-ebelata mmegide ndi mmadu. A na-atụ anya nke a ruo oke oke iji duzie akụkụ abụọ ahụ site na ntinye uche nke inwe ihe ndekọ ahụ. Onye isi ndị uwe ojii Greensboro bụ Ken Miller na-ekwu na anyị na-agba ndị ọrụ anyị ume ka ha gwa ndị mmadụ na ha na-edekọ ebe anyị chere na ọ na-ebuli n'akụkụ abụọ nke igwefoto ahụ.
Ndekọ vidiyo site n'aka ndị isi jiri igwefoto a na-eyi n'ahụ n'otu aka ahụ wee nwee ike iji ya mee ihe maka idozi nsogbu dị n'ime ụlọ ọrụ. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ bụ a bara uru na-akwadebe ngwá. N'ime ihe ọmụmụ nke ndị isi ndị uwe ojii na-aga n'ihu na mba ahụ na vidiyo nke igwefoto igwefoto, 94% nke ndị zaghachirinụ gosipụtara na ha na-eji ya maka nyocha nke ndị isi oche iji lebara omume gọọmentị anya ma ọ bụ dịka ngwa nkwadebe. Isi igwefoto vidiyo nwere nnukwu ihe ejikere ụdị. Mgbe ha na-elele ihe nkiri, ndị isi ụlọ ọrụ nwere ike ịtụle atụmatụ dị ugbu a wee họrọ ma ọ bụrụ na mgbanwe kwesịrị ịdabere na ezigbo ahụmịhe gọọmentị. Officelọ ọrụ nkwadebe nwere ike ịmepụta ọnọdụ ụfọdụ iji kwadebe ndị isi ya dabere na ezigbo eweta n'ọhịa. Ọzọkwa, ịkwadebe ọrụ ugbu a ga-enwe ike ịkọwa ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ n'ime nkewa ahụ.
Ikekwe enwere ike ọnọdụ kachasị mma iji mejuputa iwu ga-ejide ma kwenye nkwenye maka nyocha mpụ. Ọzọkwa, ọ bụ naanị otu ngwa ọrụ nwere ike inye aka na-aga nke ọma nke mbido ndị na-emebi iwu. N'oge mgbe ndị isi na-aza ụkpụrụ omume ọjọọ, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ntinye uche ha na isi mkpa dị mkpa bụ ichebe ọnọdụ ahụ ma na-enyere ndị na-adịghị mma aka iji usoro enyemaka ahụike. Ka ha malitere nzukọ ha ma gbalịa ịchịkọta ihe merenụ, o siri ike iche echiche banyere ụzọ aghụghọ ọ bụla. Site na iji igwefoto a na-eyi n'ahụ, onye ọrụ gọọmentị nwere ike ịdekọ ebe ahụ na ọtụtụ ụzọ aghụghọ oge ga-efu efu. Ka ha na-agaghari na gburugburu ebe ojoo, ha na ede ya dika odi na mbu. Ngwaọrụ a nwere ike inye ndị ọrụ ozi data bara ụba nke na-egosi nke ọma oge ụfọdụ mgbe emesịrị udo ma ghara ọsọ ọsọ. Onye uweojii na-ahụ maka ndị uwe ojii Dalton, Parker na-ekwu na ọ bụghị dịka igwefoto ụgbọ ala, kamera ndị a na-eyi na-edekọ ihe niile na-eme dị ka ndị isi na-agagharị na omume ọjọọ ahụ na izute ndị dị iche iche. Igwefoto ndị ahụ eyi bara uru dị oke egwu na-echekwa data.
obi a na-enye ndị na-enyocha akwụkwọ ikike ma nwee ike ịnabata ihe ọhụrụ a. Inwe ndekọ vidiyo iji gosipụta n'ụlọ ikpe na-esikarị ike inweta. Na Kentucky, onye ọka iwu na-eche nche agbata obi gbasara iji tinye vidiyo vidiyo na-eyi ahụ. Ọ na-eme ka ọ dịrị ha mfe nghọta ịghọta otu atụmatụ aghụghọ a na-akwụ ụgwọ bụ na ihe omume niile nwere ike ịbụ nnukwu uru ha ebe ọ bụ na ịchọghị ndị ọka ikpe ịhụ nke a. Nke a bụ ihe kachasị dị irè maka ọnọdụ obi ọjọọ ezinụlọ mgbe enyere nkwenye vidiyo n'ụlọ ikpe. Dị ka ọ na-adịkarị, karịsịa ma ọ bụrụ na eserese mmejọ na ụjọ na ndị ụjọ na-atụ ụjọ, ha ga-ahọrọ ịghara ịkatọ ebubo. Nkwenye mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ nsogbu, ọnọdụ kachasị mma. Ejikọtara ya na mbibi na-enweghị atụ na mbido bụ maka ebumnuche na ebumnuche niile enweghị atụ.
Nzuzo 6343 1 Echiche Taa